Linux inonyatsoda exFAT seMicrosoft ungadai uchitenda here? | Linux Vakapindwa muropa
Linux inonyatsoda exFAT seMicrosoft ungadai uchitenda here?
El Microsoft inozivikanwa "rudo" yeLinux haina kudaro. Izvo zvinongovakodzera izvozvi kuti vave seizvi nekuda kwavo. Uye kuzviona senzira yekukanganisa kukanganisa zvachose. Iyo Linux Foundation inotora pane iyi mipiro kubva kune yavo nyowani "mupi," uye Microsoft iri kudhirowa pane izvi futi. Ini ndinofunga mapato ese ari maviri akajeka pamusoro pekuti ivo ndivanaani uye vanofanirwa kuchengeta tsoka dzavo pasi kuti varege kutungamira mukukanganisa.
Zvino, kuLxA, isu tinoshambadza mupiro weEFFAT iyo Microsoft yakanga yaita. Yaimboita purofiti kubva patent pane iyi FS, asi ikozvino yaburitsa iyo kuti igone kushandiswa muLinux kernel. Asi tinofanira kurangarira mazwi aJames Plamondon, muevhangeri weMicrosoft: «Mutsetse wese wekodhi wakanyorerwa kumatanho edu kukunda kudiki; tambo yega yega yekodhi yakanyorwa mune chero imwe mwero kukundwa kudiki.".
Izvozvo zvakati, Ndiani anonyanya kufarira kufamba uku? Wakamira kuti ufunge izvi? Izvi zvinofarira Linux nenharaunda zvakanyanya? Kana zviri nani kuMicrosoft? Ichokwadi ndechekuti Linux inogona kutobata rudzi urwu rwefaira system nemadriver, sezvazvinogona neNTFS kunyangwe zvisiri zveLinux. Nekudaro, Microsoft inobatsira chero bedzi Linux yava kuzokwanisa kubatana zvakanyanya neMicrosoft.
Nekuti izvo haisati iri nhau huru kune iyo Linux nyika, Kupfuura zvazvinoreva kudhipatimendi reMicrosoft repamutemo uye kuunganidzwa kwepatent. Asi inhanho yakanangana neimwe nzira yekuenderera uchipinza kodhi yeMicrosoft mukernel uye kuenderera uchisimbisa mwero wayo kuitira kuti kutsiva exFAT iyo Samsung yainayo haisi dambudziko kwavari. Izvi ndozvinofungwa nemumwe wevaLWN's Linux nyanzvi: «Zviri pachena kuratidza kana iwe uchifunga kuti ndiani akasimudzira chinhu chose, zvichikonzera bhomba paGoogle. Uye izvo? Linux yatove nekutsiva izvo zvakangofanana. Nehunyanzvi kutaura, Samsung yatove neinotsiva. Pamwe ndizvo zvinotya Microsoft. Microsoft inogara ichivavarira kuve muyero. "
Microsoft yakabatsira kwemakore kubva pamvumo yayo uye vakashandisa patent dzakadai sechombo kurwisa sosi yakavhurika uye kuita purofiti kubva kwavari. Zvinokatyamadza tichifunga kuti vaipesana nazvo, asi mari imari ... Uye kunyangwe Microsoft nhasi yakati siyanei neMicrosoft zvisati zvaitika, ivo vachiri kambani iri kutsvaga kuwana mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux inonyatsoda exFAT seMicrosoft ungadai uchitenda here?
Ichokwadi kuti Microsoft inokunda, inotora zvikamu zveLinux kernel uye inoburitsa chii mukuchinjana? Calculator kuti pane chiuru cheavo vari paInternet uye zvirinani, inotora chimwe chidimbu che linux uye chayakaburitsa? Explorer, Chii chinopa Microsoft zvakare?
Iye zvino zvinouya ne exfat, zvakanaka, chimwe chinhu chinoshandiswa mazuva ano, asi chinofanira kusunungura ntfs kana zvirinani.
Mhoroi, ini hapana chandinoziva nezve tekinoroji, ndiri akapusa Windows XNUMX uye Ubuntu Mate mushandisi. Uye izvi zvinonhuwa kwandiri kuti Microsoft ichawana yakanaka kucheka kwenyaya uye kunyange zvakanyanya ...
"Inofanira kusunungura ntfs ... zvirinani"
Makabvisa mazwi mumuromo mangu.
Zvinozviita kubva kuCA asi kwete MAHARA
Izvo mumaonero angu hazvienderane neGPL, uye nekusapa chero chinhu chakakosha - senge madhiraivha kana firmware - zvaisazofanira kuenda kune kernel zvakadaro.
Maitiro ekurarama pasina Netflix. Open sosi inobatsira iwe